ICascade Cottage-Ifanelekile kwiiNtsapho kunye nabahlobo
Chelmsford, New Brunswick, Canada
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguEmily
Le ndlu yelog yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlanganisana nabahlobo kunye nosapho phakathi kophuhliso lwepropathi yethu yeNdalo Resort. Le cottage inamagumbi okulala ama-5, iibhafu eziyi-2.5, igumbi lokuhlala elinesofa, isihlalo sothando, isitulo, indawo yokutshisa iinkuni, ikhitshi elikhulu, itafile yegumbi lokutyela elihlala i-12 kunye nokusonga okukhulu kwiveranda.
Kukho umzuzu wokubhukisha ubusuku obu-3 ngempelaveki kunye nokubhukisha ubusuku obu-2 evekini kwiinyanga zasebusika. *Ikwathintelwe kusapho/iqela elizinzileyo le-10 okanye ngaphantsi ngeli xesha.
Le yindlu eyoyikisayo yokuchitha ixesha lokudibanisa omnye nomnye. Kukwakho nendawo enkulu yokupaka, i-BBQ yabucala, iWasher/Isomisi kunye nomgodi woMlilo. Iveranda enkulu inetafile yepatio kunye nezitulo ze-6 kunye necandelo legumbi lokuhlala langaphandle elinesihlalo sothando, izitulo ezi-2 kunye netafile yekofu.
*Sinezindlu ezi-4 ezingakumbi kule ndawo ezinokuqeshwa umntu ngamnye okanye zonke kunye. Qiniseka ukuba ujonge ezinye izintlu zethu.
*Nceda waziswe ngezithintelo ze-NB COVID-19 kunye nemigaqo yokhuseleko yokuhamba naxa udibanisa amakhaya kwiindlwana. Uya kujikiswa ukuba imimiselo ayikhathaleli.
4.92 ·Izimvo eziyi-25
4.92 · Izimvo eziyi-25
EZINE zeNdalo Resort ikwilali encinci yasemaphandleni yaseChelmsford, eNew Brunswick. Umlambo waseMazantsi Ntshona weMiramichi uhamba ecaleni komphambili wepropathi ebonisa amava awodwa omlambo. Icala lomlambo liyatshintshana kwaye amanqanaba amanzi anyuke kwaye ahle kabini yonke imihla ngamaza olwandle, enikezela ngembonakalo yomhlaba kunye nomdla oguqukayo.
Kukho i-Ofisi Cottage esembindini kwipropathi. Siyavuya ukukwamkela kwaye sikubonise ngeenxa zonke, cwangcisa ama-adventures okanye sikushiye unobumfihlo obupheleleyo kunye nokungena / ngaphandle kokudibana.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chelmsford